Wednesday December 02, 2015 - 18:12:46 in Articles by Super Admin
Hogaamiyeyaasha Puntland iyo Galmudug oo heshiis rasmi ah ku kala saxiixday Gaalkacyo. Hogaamiyeyaasha maamulada Puntland iyo Galmudug Dr. Cabdiweli Maxamed Cali iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa maanta heshiis rasmi ah ka gaaray colaadii ka aloos
Waxaa heshiiskani goob joog ka ahaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Mudane Cumar Cabdirashid Sharmarke, madaxweyne-yaasha Koofur Galbeed Shariif Xasan Aadan, iyo Jubbaland Axmad Maxamed Islaam, xubno ka tirsan golaha Wasiirada, xildhibaano, nabadoono, iyo mas'uuliyiin mataleysay beesha caalamka.
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Cumar Cabdirashiid oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyay hogaamiyeyaasha maamulada Puntland iyo Galmudug sida ay ugu hogaansameen qodobada heshiiska, waxa uuna xusay in heshiiskani uu hormuud u noqdo nabad iyo isfaham dhex mara maamulada deriska ah.
"Gaalkacyo waxay halbowle u tahay nabadda iyo xasiloonida dalka, waxaana rajeynayaa in heshiiskani uu hormuud u noqdo dhameystirka is fahmi waaga jira, waxaana ku adkeynayaa hogaamiyeyaasha Puntland iyo Galmudug inay illaaliyaan" ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha oo ka hadlayay munaasabadda.
Dawlad Goboleedka Galmudug, waxay umadda Soomaaliyeed, Dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba u caddeyneysaa in ciidamada Puntiland ay weerar qaawan ku soo qaadeen fariisimada ciidamada Galmudug ee koofurta magaalada Gaalkacyo abaarihii 11 duhurnimo ee maanta, taas oo macnaheedu yahay in Puntiland ay gabiahaanba jabisay heeshiikii shalay oo taarikhdu ahayd 2/12/2015 uu madaxweynahoodii la saxiiday madaxweynaha Galmudug. Sidoo kale waxaan caddeynaynaa in Puntland ay dhabarka u ridaneyso dhammaan masuuliyadda dagaalka ka socda Gaalkacyo. Full Article